अमेरिकाले भिसा दिएन, नेपालमै नयाँ ‘सोचाइ’ले संसारभर चिनायो ! – Khabar Silo
अमेरिकाले भिसा दिएन, नेपालमै नयाँ ‘सोचाइ’ले संसारभर चिनायो !
ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी)ले विश्वकै उत्कृष्ट प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालबाट बोनिता शर्मालाई समेट्यो। यस वर्षका विश्वका प्रभावशाली १०० महिलाको सूचीमा बोनिता ७५औँ नम्बरमा हुनुहुन्छ ।
१० देखि १७औँ दानाले बच्चा बस्ने सम्भावना देखाउँछ । यसमा भएको सानो रिङ सारेर आफ्नो महिनावारी हुने दिन सम्झन पनि सकिन्छ। यसमा महिनावारी हुनुअघि ढाड र कम्मर दुख्ने, रिस उड्ने, रुन मन लाग्नेलगायतका समस्या आउन सक्छ है भनेर संकेत दिने दाना पनि छन् ।
केही समयपछि साथीहरु अमेरिका पुगे । आफूलाई आड भरोसा दिने साथीहरु छुटेपछि बोनितालाई काठमाण्डौ उराठ लाग्न थाल्यो । एक्लो जिन्दगीका घुम्तीहरु पार गर्न अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा आमाबुवा र आफन्तले दिन्थे । तर एक्लै घुम्ती पार गर्ने आँट पलाइसकेको थिएन।
जीवन सुन्दर फूल हो। यो फूललाई कसरी सजाउने, हुर्काउने र बढाउने भन्ने आफैंमा भरपर्छ। मानिस स्वभावैले आफूलाई सुन्दर देखाउन चाहन्छ। यही चाहनाअनुरुप आफूलाई सुन्दर र जवान बनाइराख्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ। सुन्दर भन्नेवित्तिकै धेरैजसो मानिसले राम्रो अनुहारलाई मात्र बुझ्ने गरेका छन्। तर, अनुहार मात्र हेरेर सुन्दरताको मापन हुँदैन। सुन्दर र जवान देखिन शीरदेखि पाउसम्म मात्र […]
आलुको रसबाट चम्काउनुहोस् अनुहार, यस्तो छ प्रयोग गर्ने विधि
काठमाडौँ । गर्मीमा अनुहारमा आलुको रस लगाउनाले धेरै फाइदाहरु पाउन सकिन्छ। यसले अनुहारका बिबिराबाट मुक्ति दिनुका साथै छालालाई गोरो बनाउने काम गर्छ। यसलाई प्रयोग गर्ने विधि पनि एकदमै सजिलो छ। यसका लागि आलुलाई कुटेर त्यसको रस निकालेर अनुहारमा लगाउनुपर्छ। आलुलाई कुटेर त्यसको बाक्लो रसलाई अनुहारमा लगाएर पाँचदेखि दश मिनेटसम्म राख्नुहोस् र यसलाई सफा पानीले धुनुहोस् […]
अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन्। जसले गर्दा अनुहार चम्किलो हुन्छ तर हात फुस्रो र कालो हुँदा त्यो सुन्दरतामा नै फिका हुन्छ। एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ। तपाईंको पनि अनुहारको तुलनामा हात नराम्रो र कालो […]